नारायणकाजी माथी नैतिकताको प्रश्न, के कमान सिंह लामाको दर्दनाक पिडाको पछि उनै थिए ? - Janmabhumi Post
प्रीतम कुमार तामाङ २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०७:०१
गत बुधबार राती कोरियाका लागि पुर्व राजदुत एवं नेकपाका केन्द्रिय सदस्य कमान सिंह लामाको उपचारको क्रममा शिक्षण अस्पताल महराजगंजमा निधन हुनुभयो । उहाँ करिब २ हप्ता देखि कोभिड १९ बाट थलिएपछी उपचार गराईरहेका थिए । लामाको निधन कोभिडबाट भएतापनी केही दिन पश्चात् केही विषय बस्तुहरुले गर्दा सबै अचम्मित छन् । कारण, लामा आर्थिक लेनदेनका कारण आफ्नै मित्र अनि परिवारकै सदस्यहरुबाट पिडित थिए भन्ने कुरा उहाँको अन्तिम स्टाटस, एकाएक बाहिरिएको भोइस रेकर्ड अनि भिडियो फुटेजबाट प्रष्ट हुने आधार देखिन्छ ।
सार्वजनिक भएको एक भिडियो फुटेजमा नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ र स्वर्गीय लामा बिच करोडौंको लेनदेनको विषयमा चर्काचर्की भएको स्पष्ट देख्न अनि सुन्न सकिन्छ । भिडियोमा शेयरको कुरा र आफुले उल्टै ब्याज तिर्नु परेकोले समस्यामा परेको बताएका छन् ।
यो विषयलाई लिएर नेकपा सचिवालयलाई समेत जानकारी गराएपनी यस विषयमा कसैले चासो नदिएको समेत पारिवारिक श्रोतबाट बुझ्न आएको खबर सनराईज खबरले लेखेका छन् ।
यो भिडियो बाहिरिए संगै लामाका अनन्य मित्र श्रेष्ठको नैतिकता माथी प्रश्न उब्जिएको छ । के उहाँहरु बिच साँच्चै आर्थिक लेनदेन थियो ? यो भनें प्रबक्ता श्रेष्ठले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ । अनि मात्र उहाँ माथी उब्जिएको प्रश्नको हल हुन सक्छ ।